Kanye embindini weHatfield McCoy!
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguRobert
I-93% yeendwendwe zakutshanje inike uRobert iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ukusukela ngo-2005, abatyeleli kwiHatfield McCoy trail system bahlala nathi eBoars Nest ATV Lodge. Sime kumda weWV/K kuMlambo iTug. Ungahlala ukukhwela iindledlana, ubaleke kugqatso lweMatewan, undwendwele indawo zembali ezinxulumene neHatfields kunye neMcCoys okanye uziphose nje nabahlobo okanye usapho.
Sinendawo eninzi kunye nokuba ngasese. Singakwazi ukuhlalisa phantse yonke itreyila yelori ye-5th wheel combo phaya, kwaye ngaphezu kwesibini ngexesha! Sikwanayo nokugcinwa kwangaphakathi kwe-ATV kunye neebhayisikili ezingcolileyo phantsi kwendlu, ephakanyiswa kwisiseko sebhloko, esivumela ukugcinwa. Yiba ngononophelo, umnyango ubanzi ngokwaneleyo, jonga intloko yakho!
Idolophu yaseMatewan WV kunye neBuskirk Ky ngumzuzu nje okanye emibini ezantsi kwendlela. Iindawo ezahlukeneyo zokutya, ivenkile enkulu, isikhululo segesi kunye nevenkile yebhiya zikhona kuwe, kwaye iDollar General ingaphaya kwesitrato.
Ndihlala kwindawo ephezulu ye-NY ukuze ungandiboni ngexesha lokuhlala kwakho, nangona kunjalo, ukuba ufuna nantoni na, mna okanye umphathi wam uhlala ekhona ukukunceda ngayo nantoni na onokuyidinga.